လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းဆိုင်ရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်နှင့်အထက်ပါကျောင်းလူငယ်များအကြားဆက်စပ်မှုရှိသည့်အချက်များ၊ အီဘသီယိုးပီးယားနိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်း၊ ဂွန်ဒါဇုန်၊ ဒေဘိုတာဘို၊ ၂၀၁၇ (၂၀၁၁) - သင်၏ ဦး နှောက်သည်
BMC Res မှတ်စုများ။ 2019 Jun 3;12(1):314. doi: 10.1186/s13104-019-4348-3.
Arega WL1, Zewale က TA2, ဘိုကလေး ka3.
အိမ်မထောင်မီလိင်လက်မထပ်ရသေးသည့်လူပုဂ္ဂိုလ်များအကြားမိမိဆန္ဒအလျောက်လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်။ ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်လေ့လာမှုဧရိယာ၌အိမ်မထောင်မီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်များနှင့်ဆက်စပ်အချက်များချို့တဲ့နေကြသည်။ ထို့ကြောင့်ဤလေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်များအဆိုပါပျံ့နှံ့ဆုံးဖြတ်ရန်နှင့် Debretabor အထက်တန်းကျောင်းလူငယ်များအကြားအိမ်မထောင်မီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်များနှင့်ဆက်စပ်အချက်များဖော်ထုတ်ရန်ရှိကြ၏။
Debretabor မြို့အထက်တန်းကျောင်းလူငယ်များအကြားတွင်လက်မထပ်မီလိင်ဆက်ဆံမှုပျံ့နှံ့မှုမှာ ၂၂.၅% ဖြစ်ပြီး၎င်းအနက် ၆၃.၉% သည်အမျိုးသားများဖြစ်သည်။ ထိုအထက်တန်းကျောင်းလူငယ်များအနက်အများစုသည် (၆၀.၂%) သည် ၁၅-၁၉ နှစ်အရွယ်တွင်ပထမဆုံးလိင်ဆက်ဆံမှုပြုခဲ့သည်။ လိင်ဆက်ဆံခြင်းစတင်ခြင်း၏အဓိကအကြောင်းအရင်းမှာချစ်ခြင်းမေတ္တာကျဆင်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပြီး ၄၈.၁ ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီးနောက်တွင်လိင်ဆန္ဒမှာ ၂၂.၂% ရှိသည်။ လက်မထပ်မီလိင်ဆက်ဆံခြင်းအတွက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည့်ခန့်မှန်းသူများသည်ဘာသာရေးပညာရေးကိုမတက်ရောက်သောလူငယ်များဖြစ်ကြသည်။ (AOR = 22.5, 63.9% CI (60.2, 15)], ယောက်ျားလေးသို့မဟုတ်မိန်းကလေးသူငယ်ချင်းများရှိခြင်း [AOR = 19, 48.1% CI (22.2, 7.4)], နေ့စဉ်အရက်သောက်ခြင်း [AOR = 95, 3.32% CI (16.43, 9.66)] နှင့်တစ်ပါတ်နှစ်ကြိမ်ထက်နည်းသောပမာဏ [AOR = 95, 4.80% CI (19.43, 5.21)], ညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်ကိုကြည့် [AOR = 5.15, 95% CI (2.56, 10.37)] နှင့်လူငယ်များသည် [AOR = 0.51, 95% CI (0.27, 0.96)] ကျေးလက် Resident မိသားစုများထံမှလာ၏။
KEYWORDS: Debretabor; အီသီယိုးပီး; အိမ်မထောင်မီလိင်; လူငယ်များ
မသောသူတို့အားနှိုင်းယှဉ်ပါကညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်ကိုစောင့်ကြည့်ခဲ့သူကျောင်းသားများကပိုဖွယ်ရှိအိမ်မထောင်မီလိင်ကျင့်သုံးခဲ့ကြသည်။ Shendi မြို့အလားတူတွေ့ရှိချက် [ရှိပါတယ်13] နှင့်မြောက်ပိုင်းအီသီယိုးပီး  ။ အဆိုပါဖြစ်နိုင်သောအကြောင်းပြချက်ညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်လူငယ်များသည်လိင်ဆက်ဆံခြင်းအဘို့အဇီဝကမ္မနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်ကစေပါတယ်။
ညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်ကိုစောင့်ကြည့်တဲ့သူကျောင်းသားများ 5.15 ဆပိုမိုဖြစ်နိုင်ဖွယ် [AOR = 5.15, 95% CI (2.56, 10.37)] ညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်မကြည့်ခဲ့ဘူးသောသူတို့အားနှိုင်းယှဉ်ပါကအိမ်မထောင်မီလိင်ကျင့်သုံးခဲ့ကြသည်။